यौन, नारी उत्पीडन र दर्शन
२०७५ चैत २९ शुक्रबार ०९:४८:००
यौनलाई दर्शन र साहित्यले जति खुलारूपमा समाजले स्वीकारमा गर्न सकेको छैन । व्यक्तिपरक कल्पना बाहेक आज पनि यौनका विषयमा समाजमा खुला बहस हुन सक्तैन । तर, यौन साहित्यको इतिहास र दर्शन लामो छ । यौनको अन्त्यहीन कल्पनालाई कथाको रूपमा व्यक्त परम्परा पूर्व र पश्चिम सबैतिर देखिन्छ । हिन्दु धर्मग्रन्थदेखि युनानी मिथकहरुसम्म लिखित उत्खनन भए जति अधिकांश यौनको मामिला अछुता छैनन् ।
यस लेखमा मध्यकालसम्मको विश्व दर्शन र यौन साहित्यका विविध पाटालाई अन्वेषण गर्न खोजिएको छ । तसर्थ पूर्वीय एवं पश्चिमा दर्शन र स्रोतमा आधारित पौराणिककालदेखि मध्यकालसम्म अर्थात् चौधौं शताब्दी पूर्वको समय परिवेशको आधार लिइएको छ ।
पूर्वीय दर्शनका पौराणिक ग्रन्थहरुलाई लेखनकालका आधारमा दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । एउटा वैदिककालमा लेखिएका ग्रन्थहरु जस्ताको तस्तै र वैदिककालमा लेखिएर लोप भई मध्यकालसम्ममा आएर पुनर्लेखन भएकाहरु । वेदहरु वैदिककालका लेखन हुन् जसमा त्रिमूर्तिहरु ब्रम्हा, विष्णु र महेश्वरको चरित्रको कल्पना भेटिँदैन । अर्को मध्यकालसम्ममा आएपछि लेखन र पुनर्लेखन भएका ग्रन्थहरु जस्तै पुराण, महाभारत वा रामायण जसको लेखनमा सरलता धेरै भेटिन्छ ।
हिन्दु दर्शनअनुसार ब्रम्हा, विष्णु र महेश्वरको परिकल्पना पुराणमा लेखिएपछि भएको हो । अठार पुराणमा पनि शक्तिको अलगअलग वर्णन छ । ब्रम्ह, ब्रम्हाण्ड, ब्रम्हवैवर्त, मार्कण्डेय र भविष्य पुराणले ब्रम्हालाई नै सर्वश्रेय मानेको छ । विष्णु पुराण, श्रीमद्भागवत, नारदेय पुराण, गरुड पुराण, पद्म पुराण र अग्नि पुराणले विष्णुलाई नै अजेय परमेश्वर मानेको छ ।
शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कन्द पुराण र वायु पुराणले भने शिवशक्तिको महिमा वर्णन गरेको छ । त्यसबाहेक वैदिक उपनिषद्हमा भने त्रिमूर्तिको प्रसंग कमै पाइन्छ । उपनिषद्हरु ठूलो संख्यामा उपलव्ध हुनु र तिनको लेखनमा विविधता देखिनुले यसको लेखन वैदिककालदेखि निरन्तर रहेको भन्न सकिन्छ । तसर्थ पौराणिक ग्रन्थहरुलाई लेखनकालसँगै महिमा वर्णनका आधारमा दुई किसिमले विभक्त गर्न सकिन्छ ।
उपनिषदहरुभित्रको कथा, परिवेश, विषय, प्रस्तुति र सन्दर्भहरु देश, काल र चरित्र वर्णनभन्दा अलग देखिन्छ । तसर्थ उपनिषद्का उद्गारहरु सत्यको नजिक रहेको प्रतीत हुन्छ । पुराणमा भने मिथकलाई बढी प्रश्रय दिएको पाइन्छ । पुराणले कथावस्तु, काल, समय, परिवेश जस्ता वस्तुमा बढी जोड दिएको छ । रचनाकालका आधारमा पुराणले समाज विकासक्रमको पछिल्लो स्थिति वर्णन गरेको छ ।
यौनका सन्दर्भमा पुराणहरुमा जे जति लेखिएको छ वैदिक ग्रन्थहरु नितान्त अलग छन् । पुराणहरुको ध्येय प्राकृतिक मानवीय आचरणको रोमाञ्चक प्रस्तुति दिनु र स्रोता वा पाठकको मन जित्नु रहेको देखिन्छ । पूर्वीय दर्शनमा जति यौनका कथा भेटिन्छन् ती सबैको स्रोत अन्ततः पुराणहरुमै भेटिन्छ ।
पुराणहरुले यौन साहित्यको विधामा नारी हिंसा, शोषण र उत्पीडनलाई अत्याधिक र बढाइचढाइ प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । पञ्चकन्या अर्थात् अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुन्ती, मन्दोदरीको चरित्रलाई यौनिक चरित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । कतिपय अवस्थामा बलात्कारका घटनालाई समेत अतिरञ्जित गरेको र पीडक पुरुषको गुणगान गरिएको छ । यस अर्थमा के त्यो कालमा महिलाको बलात्कार खुला थियो भन्ने प्रश्न पैदा हुन्छ । तिनमा कथाका तत्कालीन महापुरुषहरुको समेत सम्मति छ भन्ने आशय व्यक्त गरिएको छ ।
द्रौपदीको चिरहरणमा भीष्म र विदुरको मौनले यसको पुष्टि गरेको छ । महाभारतमा नै कर्णलाई एकातिर महानायक चरित्रमा प्रस्तुत गरिएको छ भने तिनै कर्णले अर्कातिर द्रौपदीको पीडामा प्रतिशोध ओकलेको पाइन्छ ।
भीष्मको प्रतिज्ञा पनि प्रसिद्ध छ । तर, त्यो प्रसिद्धि र सम्मान उनको नारीप्रतिको दृष्टिले गुमेको छ । उनले पुरुषको मनोकांक्षाका लागि जबरजस्ती विवाह गराउन अनेकांै युद्ध लडेका छन् । अबला स्त्रीहरुलाई विभिन्न राजालाई उनले विवाहका लागि सुम्पिदिएका छन् ।
यसरी हेर्दा ती महानायकहरुको चरित्र आजको फिल्मी कथाबाट अलग पनि देखिन्छ । त्यस समयका महानायकको चरित्रले स्त्री अस्मिताको रक्षा गर्नु आवश्यक थिएन भन्ने बुझाउँछ ।
सत्ययुगका कथामा त झन् स्त्री चरित्रमाथि हुने वर्वरता बढी ददर्नाक छ । त्यसमध्ये एउटा चरित्र अहिल्याको हो । उनी इन्द्रबाट बलात्कृत नारी हुन् तर बलात्कारको सजाय उनैले पाइन् । निर्दोष भए पनि पथ्थरका रूपमा बाँच्नुपर्ने यातना पाइन् । यस कथाको प्रस्तुतिलाई मुस्लिम देशहरुमा आजसम्म विद्यमान कानुनसँग तुलना गर्न सकिन्छ । मुस्लिम कानुनमा कुनै महिला बलात्कृत भइन् भने त्यसको प्रमाणका लागि अन्य चारजना पुरुष साक्षी चाहिन्छ । त्यसो हुन सकेन भने महिला नै सजायको भागीदार हुन्छन् ।
यौनका लागि सृष्टिका धेरै जीवन्त महापुरुष पात्रहरु मुक्त छैनन् । निषाद अवस्थामा समेत कामको मोहलाई त्याग्न नसक्नु पुरुषको दोष हो । वैदिककालका धेरै सन्त र विद्वान्समेत यौन भोगको बल्छीमार्फत नैतिक अवसानको बाटोमा पुगेका थिए ।
पुराणहरुमा यौनतृष्णा मेट्ने अरु उपायहरुलाई अकाट्य मानिएको छैन । पुराणहरुले उर्वशीलाई देखेर वरुणदेव आफँै स्खलित भएको विषय उल्लेख गरेकाछन् । मेधावी ऋषि तपस्यामा लीन थिए तर मंजुषाले उनको तपस्यालाई नै रतिरागमा बदलिदिएकी थिइन् । मेनकाले ऋषि विश्वामित्रको ध्यान भंग गर्न समागमको उपाय रचेकी थिइन । यस अर्थमा पौराणिक युगपुरुषहरुसमेत कामवासना र सम्मोहनबाट अलग हुन नसकेको देखिन्छ ।
युनानीहरु जिउजलाई भगवान र सृष्टिकर्ता मान्थे । युनानी कथामा एन्टोपी र क्यालिस्टोलाई जिउज आफैँले जबरजस्ती गर्भ बोकाएका छन् । जिउज उनै क्यालिस्टोकी जिजुबाजे थिए । क्यासनारालाई असाजले आफू अनुकूल प्रयोग गरेका थिए । दिनाहलाई हिबु्र बाइबलअनुसार एक राजकुमारले यौनबन्दीका रूपमा उपयोग गरेका थिए ।
हिन्दु र युनानी मिथकहरुमा धेरै समानता छ । प्राचीन युनानीहरु ओलम्पिया पर्वतमा रहेका भगवानबाट निरन्तर सृष्टिको रेखदेख भइरहेको विश्वास गर्थे । उनीहरुको त्यो विश्वास आजका हिन्दुहरुको कैलास पर्वतमा महादेव राज भएको कथासँग मेल खान्छ । त्यसबाहेक महादेवको र जिउजको यौन चरित्रमा पनि धेरै समानता भेट्न सकिन्छ ।
युनानी सभ्यता कालान्तरमा मासिदै गयो । त्यसको मुल कारक ग्रिस साम्राज्यको पतन थियो । त्यसपछि युरोपमा रोमन साम्राज्यको स्थापना भयो । रोमन साम्राज्यको सुरुमा त्यहाँका मानिसमा युनानी संस्कृतिप्रति मोह थियो । तर इसाको तेस्रो शताब्दीपछि रोमन साम्राज्यमा बिस्तारै क्रिस्चियन प्रभाव बढ्न थाल्यो । अन्ततः रोमन क्रिस्चियन साम्राज्य बन्न पुग्यो ।
यौन र शारीरिक सम्बन्ध विशिष्ट कला र सृष्टिको अनुपम उपहारबाट पुरुषपात्र सधैँ टाढा हुन्छ । निश्चित परिधिमा रहेर उपहार ग्रहण गर्नु सृष्टिको नियम हो । तर, यसको विशिष्टतालाई आदिकालदेखि नै हिंसा, शोषण, युद्ध र जालझेलको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको पाइन्छ । यसर्थ यौनको विधामा सृष्टिको सबै प्रहर, कल्प, चर र युगहरु कलंकित देखिन्छन् ।
हिन्दु मान्यताअनुसार ऋषिहरु वैदिक दर्शनका व्याख्याकार र धर्मप्रतिष्ठाका प्रतिमूर्ति हुन्छन् । ऋषिहरुमा पनि ब्रम्हर्षि सबैभन्दा उच्च तहका मानिन्थे । ब्रम्हर्षिमध्येका वशिष्ठले आफ्नै छोरी शतरूपासँग यौनक्रीडा गरेको प्रसंग पुराणमा छ । मनुले पनि छोरी इलासँग, जहानुले छोरी जहान्वीसँग र सूर्यले छोरी उषासँग गरेको कृत्यक्रीडा आजको सचेत समाजले पचाउन सक्तैन । बाबुछोरा धहप्रचेतनी र सोम दुबैले आफ्नै नातिनी र छोरी मारिषासँगको रतिक्रीडा पनि अर्को अनौठो लाग्ने प्रसंग हो ।
विश्वामित्रदेखि र जमदग्नि ऋषिसम्मले नारीको सम्मोहनमा आफ्नो संकल्पलाई भुलेका छन् । कृष्णको रासलीलाको प्रसंगलाई पनि उनको चरित्र चित्रणमा खुलेर लेखिएको छ । ती लेखनहरुमा लेखकका रूपमा पुरुष पात्रको भूमिका प्रधान देखिन्छ । आखिरमा शास्त्रीय काव्यकारहरु किन यौन विधामा स्त्री जातिको अस्मितामाथि कलम चलाउन प्रेरित भए ? किन उनीहरु आफ्नो काव्यमार्फत स्त्रीको संवेदनशीलतामा हमला गर्न दुनियाँलाई प्रेरित गरिरहे ? यी सबै प्रश्न खोजको विषय हुन सक्छन् । तर, स्त्रीहरुको विषयबोध गरी साहित्य लेखनको क्रम पूर्वीय सभ्यतामा मात्र छ भन्नु भने मूर्खता हुन्छ ।
प्राचिन पश्चिमा समाजभित्रको नारीमाथिको हिंसा र शोषण झन् अक्षम्य देखिन्छ । पूर्वीय ग्रन्थ र दर्शनहरुका तुलनामा पश्चिमा ग्रन्थहरुमा मिथक कम भेटिन्छन् भन्ने अर्थ लाग्छ । यस अर्थमा नारीमाथिको यौन हिंसा, शोषण र उत्पीडनको कथालाई पश्चिमाले प्रयोग गरेको वर्वरता के वास्तविक नै हो ? पश्चिमी सभ्यताका व्याख्याताहरुलाई यो चोट लाग्ने प्रश्न हो ।
प्राचीन युनानमा महिलालाई दिने प्रथम सजाय बलत्कारको आदेश हुन्थ्यो । प्राचीन युनानी चित्रकारहरुको चित्रहरुले यसको पुष्टि गर्छन् । युनानको पतनपछि रोमन साम्राज्य बलियो शक्तिका रूपमा उदायो । रोमन साम्राज्यको स्थापना नै स्त्रीमाथिको दर्दनाक अत्याचारबाट भएको विश्वास गरिन्छ । पुनर्जागरण कालका चित्रहरु र बहस अधिकांश त्यसमा केन्द्रित भएको पनि देखिन्छ ।
सुरुमा रोमनहरुको विस्तारवादी सोचलाई अन्य राज्यका मानिसले हेयका दृष्टिले हेर्थे । तसर्थ रोमन पुरुषहरुविरुद्ध अन्य राजौटा दमनमा उत्रिए । तर, त्यो दमन उनीहरुका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो । रोमनहरुले साम्राज्य विस्तारका क्रममा उनीहरुले अन्य राज्य र इलाकाभित्रका हजारांै महिलालाई घरबारविहीन बनाइदिए ।
पुरुषहरुको नरसंहार र सबाइन नारीमाथिको अत्याचार नै रोमन साम्राज्य विस्तारको अस्त्र वन्यो । राज्य विस्तारका क्रममा सवाइन महिलाहरुको सामूहिक अपरण, सामूहिक बलात्कार र दासता रोमन सैनिकहरुको ठूलो उपलब्धि मानियो । उनीहरुले पछि विजयको भावमा स्त्रीको दर्दनाक पीडामाथि उत्सव नै मनाए ।
रोमनको प्रारम्भिक कालका मानिसहरु यौनका भोका सिंह थिए । तिनको तुलनामा नारीहरुमा आफ्नै शरीरको बारेमा ज्ञानको अभाव थियो । रोमन साम्राज्यमा इसाइकरणपछि चर्चहरुमा जति उच्च नैतिक स्तरको बहस चल्थे त्यहाँभित्रको नारी व्यथा पाशविक हुन्थ्यो । त्यहाँको वर्वरताको वर्णन फिलिप लार्किनलगायतका रचनाहरुमा पढ्न पाइन्छ ।
वेलायतमा मध्ययुगमा मात्र रिचर्ड दोस्रो (सन् १३८५) र हेनरी पाचाँै (सन् १४१९) ले युद्धमा महिलामाथि गरिने ज्यादतीविरुद्ध कानुन वनाएका थिए । यस अर्थमा त्यसभन्दा अगाडि युद्धताका महिलाको प्रयोग असामान्य थिएन ।
नेपोलियन बोर्नापाटका सैनिकहरुको यौन मानसिकता उनको नियन्त्रण घेराभन्दा बाहिर थियो । उनले इजिप्टको युद्धमा अपमानजनक बलात्कारमा संलग्न आफ्ना सेनालाई राक्षसको संज्ञा दिएका थिए । तसर्थ उनले त्यसमा संलग्न सेनाहरुलाई मृत्युदण्ड दिने घोषणा नै गरे ।
यस अर्थमा मध्ययुगसम्मको विश्वको यौन कामुकता धेरै हिंस्रक र जंगली रहेको पाइन्छ । मध्ययुगमा यौन जीवनको जंगलीपन धार्मिक अतिवादमा आडमा असाध्यै मौलाएको देखिन्छ ।
पश्चिमाहरुका लागि मध्ययुगीन विश्व यौन र लैंगिक पूर्वाग्रहमा जकडिएको थियो । उनीहरु पुनर्जागरण युग पूर्व त्यस किसिमको चिकित्सा सिद्धान्त अपनाउँथे जसमा उपचारका क्रममा यौन सम्बन्ध आश्चर्यजनक मानिदैनथ्यो ।
मध्यकालीन फ्रान्सेली चिकित्सक अर्नाउड डे बर्नियोलले मध्ययुगीन कामुकताको वर्वरता लिपिबद्ध गरेकाछन् । उनी एक विद्यार्थी थिए र उनको एकजना यौनकर्मीसँग सम्बन्ध थियो । उनका साथीहरु तिनै यौनकर्मीका सामु नरभक्षीका रूपमा प्रस्तुत हुन्थे । त्यसबाट उनलाई पश्चातापको रापले पिरोल्न थाल्यो । त्यसपछि आफैँले चिकित्सा विधि परिवर्तनको धेरै काम गरेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार यौन सम्बन्धका क्रममा महिला यौनकर्मीसँग क्रूर व्यवहार अमान्य थिएन । तसर्थ मध्ययुगीन चिकित्सकहरूले तत्कालीन यौन हिंसालाई वास्तविक चिन्ताको रूपमा देखाएकाछन् । त्यो समय यौनसम्बन्धका अवधिमा महिला यौनकर्मीको मृत्यु गौण मानिन्थ्यो र त्यो समय पुरुष पात्रमा संवेदना हराएको युग थियो ।
इतिहास लेखनको क्रममा यो जंगली आवरणलाई सत्तासीनहरुले लुकाइरहे । आखिरमा त्यो सत्यको पर्दाफास साहित्य र दर्शनमार्फत भयो । युरोपमा पुनर्जागरण कालमा चित्रकलाले लुकाइएको वास्तविकता उजागर गर्यो ।
पूर्वीय सभ्यता मध्ययुगसम्म आइपुग्दा पश्चिमको तुलनामा धेरै सभ्य र शालीन भइसकेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । यौन हिंसा र उत्पीडनको सबालमा युरोपियन चिकित्सा मध्ययुगपछि मात्र सभ्य भएको देखिन्छ । तर त्यसभन्दा सयौं वर्ष पहिले नै वात्सायानको कामसूत्र एवं अनंगरंग जस्ता ग्रन्थले पूर्वीय समाजमा यौनलाई मर्यादित बनाउन कोसिस गरेको देखिन्छ ।
अनंगरंगका अज्ञात रचनाकारले यौनलाई त्यो हदसम्म परिष्कृत गरेकाछन् जसमा सम्बन्ध राख्न हुने र नहुने भन्नेसम्मका विषय लिपिबद्ध छन् । त्यसपछि पूर्वीय दर्शनमा यौन शारीरिक सम्पर्कको विधा र प्रेमरञ्जनको रूपमा परिष्कृत भयो । घटकञ्चुकीलगायतका खेलहरु क्रमशः विकसित भएका हुन् । यौन समागमलाई सम्भोगको रूपमा त्यसपछि मात्र व्याख्या गर्न थालियो जसको अर्थ समान भोग भन्ने हो ।
रोमन साम्राज्य एकीकृत रूपमा धेरै समय टिकेन । एकीकृत रोमन साम्राज्य करिब ४ सय वर्ष (चौथो शताब्दीको अन्तसम्म) टिक्यो र दुई भागमा विभाजित भयो । विभाजनपछि पश्चिमी एवं पूर्वीय गरी दुई रोमन साम्राज्य खडा भए । पश्चिमी रोमन साम्राज्यको राजधानी इटालीको रोम सहर थियो र त्यो अरु ८० वर्षसम्म चल्यो । पूर्वीय रोमन साम्राज्यको राजधानी भने त्यतिबेला कन्सट्याटिनोे र वाइजेन्टाइन नामले प्रसिद्ध थियो । यो साम्राज्य अरु १ हजार ५० वर्ष टिक्यो जसको केन्द्र अर्थात् कन्सट्याटिनो अहिलेको टर्कीको इस्तानबुल मानिन्छ ।
रोमन सभ्यताको पहिलो इसा पूर्वमा लेखिएको ओभिद् नाम पुस्तकका कविताले त्यस कुराको पुष्टि गर्छ । ओभिद छोटो महाकाव्य हो जसमा मन परेकी महिलालाई कसरी पक्रने र भोग गर्ने भन्ने वर्णन छ । पछि रोमनहरुले तर्क गर्न थालेका थिए त्यो रोमन महिलामा लागु हुँदैन । तर, पछिल्लो समयक्रममा भने रोमनभित्र ती पुस्तक प्रतिबन्धित गरिए ।
रोमनको सभ्यता विकासक्रमलाई फर्केर हेर्ने हो भने पहिलो आधा युग विभत्स नै थियो । पछिल्लो शताब्दीमा पूर्वीय रोमन साम्राज्य तुलनात्मकरूपमा युनानी सभ्यता र पश्चिमा रोमनभन्दा सभ्य बन्यो । तर, महिलालाई दासीका रूपमा उपयोग गर्ने प्रचलन युरोपमा रोमनले नै छोडेर गएका हुन् । साम्राज्य त पतन भयो तर दासताको संस्कृतिले जरो गाड्यो ।
पूर्वी रोमन साम्राज्यको पतनपछि ओटोमन साम्राज्य खडा भयो । पूर्वीय रोमनको अधिकांश भूभाग हालको टर्कीसहितको मध्यपूर्व हो । बिस्तारै पूर्वीय रोमन साम्राज्यमा प्रवेश गरेको इस्लामको प्रभाव अटोमन साम्राज्यभित्र राज्यले नै ग्रहण गर्यो । मुस्लिम धर्मभित्रको विभेद भने बिस्तारै अटोमन साम्राज्य कालमा बढेको देखिन्छ ।
दासता उन्मूलन नभएसम्मको अवधिमा अमेरिका पनि यौनको मामिलामा धेरै दुराचारी देखिन्छ । कालामाथिको दासता श्रमको दासतामा सीमित थिएन, यौनको लालसामा महिलाको किनबेच हुन्थ्यो । गोराहरु कालामूलका महिला पुरुषको किनबेचमा संलग्न हुन्थे ।
पूर्वीय र पश्चिमा दर्शन, साहित्य वा कलाकृति सबैले तत्कालीन समाजभित्रको विकासक्रम र घटनालाई लिपिबद्ध गरेकाछन् । इतिहासको लेखनमा शक्ति र धनको प्रयोग बढी हुन्थ्यो । तसर्थ इतिहास राजा र सामन्तको लेखिन्थ्यो । त्यसैले इतिहासले वास्तविकतालाई धेरै तोडमोड गर्न खोजे झैँ लाग्छ ।
दर्शन, साहित्य वा कलालाई राज्यले केही प्रश्रय दिएको थियो । त्यसमा शक्ति र धनको प्रयोग त्यति धेरै हँुदैनथ्यो । तसर्थ स्रष्टाहरुले वास्तविकतालाई दर्शन, साहित्य वा कलामार्फत लेखिदिए । उनीहरुको त्यस कामले इतिहास लुक्न सकेन र राज्यले भेउ पाउन पनि सकेन । यसैले त साहित्य, दर्शन र कलाका सृजनाभित्रको शक्तिलाई राज्यले कहिलै दबाउन सक्तैन भन्ने गरिन्छ ।